TSENA SOTEMA MAHAJANGA : Tsy maintsy miverina amin’ny toerany ny mpivarotra
Tsy maintsy miala amin’ny sisin-dalana ireo mpivarotra eny Tanambao Sotema ary tsy maintsy mivarotra amin’ny toerana natokana ho azy ao amin’ny tsena Tanambao Sotema araka ny didy navoakan’ny kaominina ambonivohitr’i Mahajanga laharana 499-17 nivoaka ny 28 desambra 2017. 12 janvier 2018
Efa nampahafantarina ny mpivarotra rehetra tao an-toerana izany ary manomboka ny voalohan’ny volana janoary 2018 no efa tokony nampiharina ka niditra ny tsena izy ireo. Efa dila ny herinandro nefa mbola miziriziry mivarotra eny ivelan’ny tsena ny mpivarotra sasany. Hany ka misy ny fepetra tsy maintsy horaisina, araka ny nambaran’ ny lehiben’ny tsena eto Mahajanga Maeva Portos.
Efa ho tonga ny fotoana fidinana ataon’ny tompon’andraikitra ka horaofina avy hatrany ny entana mbola mipetrapetraka amin’ny sisin-dalana, hoy hatrany izy. Efa misy fandaminana napetraka ihany koa ao anatin’ny tsena, ka ialan-tsiny, hoy ny lehiben’ny tsena izay tratra fa efa nampiomanina mialoha ireo mpivarotra. Tsy natao hivarotana ny sisin-dalana fa napetraka ho an’ny mpandeha an-tongotra. Tery dia tery ny lalana amin’io toerana io nefa betsaka ny mpampiasa lalana mifamezivezy na mpandeha an-tongotra na fiara, posy, sarety, taksibe, kamiao mpanary fako sy fitaovam-pitaterana isan-karazany.
Ahiana hampidi-doza izany. Malalaka dia malalaka kosa ny ao anaty tsena ka rariny raha ao ireo mpivarotra no mivarotra. Ny mpivarotra anana sy filao no tena betsaka mihoa-pefy mivarotra ivelan’ny tsena, hoy ny tompon’andraikitry ny tsena. Manodidina ny Ar3000 ka hatramin’ny Ar 12 000 ny haban-tsena takiana amin’ny mpivarotra araka ny entana amidy sy ny toerana ivarotana. Tsy maintsy ampiharina kosa ny lalàna ka izay tratra dia horaofina sy ampidirina fourrière ny entany aorian’ny fampilazana maro efa natao.